Home » Wararka » EU oo walaac ka muujiyay xukuno dil ah oo maxkamada ciidamada ay fulisay
Midowga Yurub ayaa walaac ka muujiyay dilal toogasho ah oo lagu fuliyay dhowr ruux oo Soomaali ah oo dhowaan lagu toogtay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay.
Sidoo kale wakiilada Midowga Yurub ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in xukunka maxkamadaha Milatariga aysan taageersanayn.
Isniintii aynu ka soo gudubnay ayaa afar rag ah oo lagu eedeeyay inay qaraxyo mas’uul ka ahaayeen xukun toogasho ah ay maxkamada ciidamada ku fuliyeen magaalada Baydhabo.
Midowga Yurub ayaa sheegay in ay aaminsan yihiin xukunka dilka ah inuu yahay fal xaasidnimo ah oo aan bani’aadamka ku habooneyn balse ay aad ugaga soo horjeedaan falalka argagaxisada iyo ammaan darada.
“Waxaan ugu baaqeynaa maamulka Koofurgalbeed iyo Dowlada Federalka inay joojiyaan xukunada dilka ayna tixgeliyaan heshiiska la magac baxay UNGA Resolution 71/187,oo dowlada Soomaaliya hore u taageertay.”ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wakiilada Midowga Yurub ee Soomaaliya.
Sidoo kale waxaa loogu baaqay dowlada Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koofurgalbeed in dadka rayidka ah aan la saarin maxkamada milatariga oo dambiyadooda qaado Maxkamadaha kale.